chinoshamisira vakasangana plywood - China Weifang Joy Sea Trade
1. Furniture: ndiro fenicha, mhenyu nzvimbo fenicha, yokurara fenicha, kudzidza fenicha, fenicha vana, fenicha kicheni
2. Tables uye nezvigaro: dhesiki, mudzidzi matafura nemacheya, desks, dhesiki, dhesiki, tafura musangano, kombiyuta dhesiki
3. Decorative nezvipoka : mukati kushongedzwa, mukati murals, mufananidzo mapuranga, unyanzvi mapikicha, nzvimbo decorative kupenda
4. Office Categories: mudonzvo matafura, kombiyuta makabhati, dhesiki pamberi, kambani indoor zvikwangwani
5. chinjwa masuo: sandara musuo, mupanda pepuranga
6. Other Categories: kuratidza fenicha, zvitoro pakaunda fenicha, zvitoro dzezvitoro partitions, handicrafts
gadzira Weifang Joysea Trade Co., Ltd
chigadzirwa Fancy ukanyatsotarisisa plywood
zera 1220X2440MM, 915X1830MM
kubvumidza +/- 0.3mm
Main zvinhu poplar, WBP guruu
Formaldehyde kusunungurwa mureza E0, E1, E2
setifiketi ISO9001, ISO14001, American CARB
mubhadharo TT, L / C panguva kuona, nokuti nguva dzose nemhosva, tine nani muripo mazwi.
Plywood yave kwemakumi emakore kumwe vakaziva uye anovimbwa huni chivakwa zvigadzirwa. Kugadzirwa kubva matetetete romuchinjikwa-laminated ukanyatsotarisisa uye waakaita pasi kupisa uye kumanikidzwa pamwe simba adhesives, plywood ukomba vane mukuru ndeiya yakaita kugadzikana uye chakanakisisa simba-kuti-uremu reshiyo uye zvikuru husingakwanisi ekushandiswa, makemikari, uye kuchinja kwezvakatipoteredza tembiricha uye mwando .
1.Your muvhunzo chokuita chigadzirwa & mutengo kwedu akapindura mukati 24hours.
4.Detailed yepamusoro kuzvidzora hurongwa.
6.Provide chigadzirwa indasitiri yokurera for free, vanokurudzira zvinhu uye negadziriso maererano vatengi 'mamiriro ezvinhu chaiwoiwo.
10.We zvinopa vakasununguka mabasa muna China kune kwenguva vatengi, akadai Réservation hotels, vatungamiriri, rubatsiro rokutenga, vachiongorora mamwe makambani 'ruzivo, uye vachitsvaka unhu vanotengesa zvimwe zvigadzirwa.
1, chii MOQ wako?
Kazhinji Our MOQ ndiye 20ft mudziyo kana 40ft mudziyo
2, chii rako nguva pakusununguka?
Kukurukura nguva rinowanzova mukati 15days pashure agamuchira dhipoziti yenyu.
3, Customer magadzirirwo uye Logo ruripo?
Hongu, mutengi magadzirirwo uye Logo akafadza uye iripo.
4, Ndezvipi wako mukuru zvigadzirwa?
Our chikuru zvigadzirwa vari Pine Plywood / Pine LVL / Melamine mapuranga chinoumba zvinhu E0, E1, E2 / MDF / PARTICIPLE Board / Block Boards / HPL Laminate ukomba / ukanyatsotarisisa ukomba pamwe High Glossy Acrylic ukomba / Waterproof Boards / Anti-moto Boards / Polyester nebwe akatarisana mapuranga / mapepa akafukidza mapuranga uye zvichingodaro.
5, Ko ivhu dziripo?
Hongu, mharidzo akasununguka uye mitoro nokuchengeta zvaizochengetwa inounganidzwa parutivi rwako. Uye wenhevedzo akatsinhira, mundiro ichi inogona kutorwa kubva yose muripo.
Previous: rokutengesa plywood
Next: HPL Laminated Plywood kuna USA / 1220x2440mm Formica HPL Laminate Sheets
1 padiki Plywood
Anti-kutedzemuka Film Tatarisana Plywood
Pressure Kuonekwa Plywood